Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany Brezila » Milamina ve any Paris miaraka amina hetsi-panoherana mahery vaika sy COVID?
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao farany Brezila • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Zon'olombelona • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Paraly i Paris satria an'arivony no nanohitra ny fizotran'ny fahasalamana COVID-19
Ireo izay mbola tsy nahazo ny vaksinin'ny vaksinin'ny COVID-19, na mbola tsy mikasa ny hanao izany mihitsy, dia manamafy fa mampihena ny zon'izy ireo ny pasipaoro ary avadika ho olom-pirenena kilasy faharoa.
Fihetsiketsehana goavambe no nipoaka tany Frantsa noho ny fizotran'ny fahasalamana COVID-19.
Fihetsiketsehana maherin'ny 200 kasaina hatao any Frantsa anio.
Teratany frantsay mivondrona manohitra ny antsoin'izy ireo ho fanitsakitsahana ny zon'ny vahoaka.
Vahoaka mpanao fihetsiketsehana marobe no nameno ny araben'i Paris tamin'ny sabotsy, nitondra ny fihetsiketsehana rehetra tao an-tanàna tampoka sy nahalavo ny renivohitra frantsay.
Mpanohitra marobe an'arivony no nirohotra namaky ny Boulevard Saint-Marcel, tany amin'ny faritra atsimo atsinanan'ny tanàna mankany amin'ny Place de la Bastille, nitangorona nanohitra ilay antsoin'izy ireo fa fanitsakitsahana ny zon'ny olona.
Raha atambatra, 200 mahery ny fihetsiketsehana manohitra ilay antsoina hoe pasipaoro COVID-19 voalahatra ho amin'ny sabotsy Frantsa.
Nitazona takelaka nisy soratra hoe 'Ajanona' ny olona, ​​mihira ny hoe 'Fahafahana' ary mikapoka amponga. Ny sasany tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana dia hita nitafy akanjo mavo - mariky ny hetsika fanoherana goavambe iray izay nahetsika tao Frantsa nandritra ny herintaona sy sasany teo anelanelan'ny Oktobra 2018 sy martsa 2020.
2,000 teo ho eo no niditra an-tsehatra, hoy ny fampitam-baovao frantsay. Tao amin'ny Place de la Bastille, izay diavin'ny diabe, nampiasa baomba mandatsa-dranomaso ny polisy tamin'ny andiana mpanao fihetsiketsehana nitady ny hanatevin-daharana ny fihetsiketsehana.
Nanandrana nivily lalana tamin'ny diabe lehibe tany Paris koa ireo mpanao fihetsiketsehana tamin'ny fotoana maro hafa, ka nahatonga ny polisy niditra an-tsehatra, hoy ny fampitam-baovao frantsay. Nandeha am-pilaminana ny famoriam-bahoaka raha tsy izany.
Nisy fivoriambe lehibe hita ihany koa tamin'ny faritra hafa an'ny Paris. Famoriam-bahoaka dimy no nokasaina hatao tao an-drenivohitra frantsay ny sabotsy. Vahoaka marobe nivory teo akaikin'ny Eiffel Tower. Nanofahofa saina nasionaly frantsay ireo mpanao fihetsiketsehana ary nitazona faneva volomboasary lehibe misy soratra hoe 'Fahafahana' voasoratra teo.